राशिफल Archives - Like For Nepal
माघ २४ गते सोमबार : सुपादेउरालीको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुहोस , भेटी स्वरुप सबैले सेयर पनि गरौ !
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) प्रेमको बन्धन कसिलो हुने तथा जीवन साथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । ईष्टमित्र तथा सहयोगीले साथ दिनेहुँदा दैनिकी सहज रुपमा बित्नेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी अपडेट हुन सकिनेछ भने पढाइ लेखाइमा प्रगती हुनेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । वृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) प्रियजन भेट हुनुको साथै आथित्यपूर्ण सम्मान पाईनेछ । पढ्ने लेख्ने काममा सफलता हात पार्न सकिनेछ भने प्रविधिको प्रयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । वादविवाद तथा न्यायिक निर्णयहरु तपाईँकै पक्षमा हुनेछन् । नोकरीमा पदोन्नती तथा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको गतिलो योग रहेकोछ । खर्च बढे पनि उपलव्धी मुलक कामहरु हुनेछन् । मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) अध्ययनमा भनेजस्तो नतिजा ल्याउन सकिनेछ भने बित्तिय क्षेत्रसँग सम्वन्धीत पे...
दुई दिन भित्र तपाईंको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगरि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला !
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छआखिर के हो त शिवलिं’ग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिं’ग हो । शिवलिं’गको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिं’गको अर्थ लिं’ग वा यो’नी होइन ।वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्...
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल पुस २८ गते बुधबार इश्वी सन २०२२ जनवरी १२ तारीख पौष शुक्लपक्ष दशमी तिथी भरणी नक्षत्र साध्य योग गर करण चन्द्रमा मेष राशिमा आनन्दादि योगमा काण योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणाय हेमन्त ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँकार्य थालनिको योग रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । ब्यपार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । अधुराकार्यहरु सुचारु गर्न समयले बिशेष साथ दिनेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने दिन रहेकोछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा साबधान रहनु होला । मनोरञ्जन मुलक सरसामा...
आज कात्तिक कृष्ण पक्ष औँशी अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन। धन र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। सफासुग्घर, लिप`पोत नगरिएको र बत्ती नबालेको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने विश्वास अनुसार घरको सबैतिर सफासुग्घर गरी दैलो, सङ्घार, झ्याल, ढोका, कौसी, अटाली, भर्‍याङलगायतका ठाउँमा झिलिमिली पारेर लक्ष्मीको स्वागत गरिन्छ। विशेषगरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, सड्घार, कौसी, अटाली र भर्याङलगायतका स्थानमा सरसफाइ गरी दीपावली गर्ने गरिन्छ । लक्ष्मीपूजाको रात`लाई सुखरात्रि पनि भन्ने गरिन्छ। आइतबार साँझ मूलद्वारदेखि लक्ष्मी स्थापना गर्ने कोठा`सम्म गाईको गोबर र रातो`माटाले पोतेर चामलको पीठो एवम् अबीरले लक्ष्मीको पैताला बनाई केराको सुत्लामा बत्ती बाल्ने चलन छ। आजको दिनमा महा`लक्ष्मी तथा श्री गणेशको नयाँ मूर्ति वा तस्विर थापना गरेर विषेश पूजा गर्ने गरिन्छ र अन्त्यमा लक्ष्मी`को आर`ती ...
पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै आज अशोज २६ गते मंगलबार राशिफल हेर्नुहोस , कस्तो छ तपाइको भाग्य
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ । खर्चको योग रहेको हुनाले लगानिमा ध्यान दिनु होला । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य धैर्यताका कारण पद प्रतिष्ठामा बृद्धिको योग रहेको छ । मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । अरुको सहयोग निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कुरा काट्...
पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै आज २०७८ असोज २० गते बुधबारको राशिफल कस्तोछ तपाँईको दिन हेर्नुहोस्।
ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेष: प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित भेटघाट हुने तथा सल्लाह र सद्भाव प्राप्त हुने सम्भावना छ । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ । बृष:आज रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । प्रेमीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । छोटो यात्रा पनि होला । मिथुन: महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पादन गर्दा फलदायी हुनेछ । साथीभाईको विशेष सहयोग रहनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । कर्कट: पारिवारिक पुनर्मिलनको योग छ । दाजुभाईबीचको बादविवाद मिल्नेछ । आर्थिक क्षेत्र कमजोर बन्न सक्छ । चोटपटकको भय भएकाले यात्रामा साबधानी अपनाउनु होला । अध्ययन अध्ययापन सफ...
ज्योतिषीअनुसार जति पनि राशि छन् ती सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर, त्यसमध्ये पनि ४ वटा राशि यस्ता छन्, जो वास्तवमै धेरै बलिया हुन्छन् । यी राशिहरु यती बलवान हुन्छन् की, त्यहाँ अरुले दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । १. मेष राशि : यो श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मेष राशि छ । जो राशि अन्य सबै राशिभन्दा उर्जावान मानिन्छ । यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छ, रोक्नु यीनिहरुको स्वभामा हुँदैन् । यदी कसैले यो राशिका मानिसहरुलाई दिक्क बनाउँछ भने उनीहरुले त्यसको वास्ता गर्न छाडिदिन्छन् ।मेष राशिका मानिसहरु कसैमाथि भरोसा गर्दैनन् । कुनै पनि कुरालाई सधैं आफू मातहत राख्न सक्षम हुन्छन् । कुनै पनि कार्यमा आफ्नो निर्णय लागू गर्न चाहान्छन्, र धेरैजसो अवस्थामा सफल पनि हुन्छन् । यीनिहरु कसैसँग प्रभावित भएर आफ्नो जीवनको दिशा बदल्दैनन् । २. बृश्चिक राशि : बृश्चिक राशिका मानिसहरु समर्पित र इमान्दार...
आज मिति २०७८ भाद्र ३१ गतेको सेप्टेम्बर १६ राशिफल कस्तोछ तपाईहरुको दिन चर्य आउनुहोस् जान्नकाे लागी। यो पनि पढनुहोस्। धर्तीमा पाइने वनस्पतीमध्ये पीपलले अक्सिजनलाई शुद्ध गर्ने सबैभन्दा अह्म बृक्ष हो । यो एक यस्तो बृक्ष हो, जसले २४ घण्टा अक्सिजन दिन्छ । जबकी, अन्य बनस्पतीले राती कार्बन डाईअक्साइड वा नाइट्रेट छाड्छ । यो यस्तो बृक्ष हो, जसले सूर्यको ताप त रोक्छ तर प्रकाशलाई रोक्दैन । पीपलको पात, हाँगा, जरा सबैमा औषधिय गुण हुन्छ । थुप्रै रोग निवारणमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुटुको रोगमा : यदि मुटु सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने पीपल लाभदायक हुनसक्छ । यसका लागि पीपलको १५ वटा ताजा हरियो पातलाई एक गिलास पानीमा राम्रोसँग उमाल्ने । पानी त्यसबेलासम्म उमाल्ने जब पानी एक तिहाइ घट्दैन । अब त्यसलाई सेलाउन दिने र छान्ने । उक्त पानीलाई तीन खुराक बनाउनुहोस् । त्यसलाई बिहान हरेक तीन घण्टाको अन्तरमा प...
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल भाद्र ३१ गते बिहिबार इश्वी सन २०२१ सेप्टेम्बर १६ तारीख भाद्र शुक्लपक्ष दशमी तिथी पूर्वाषाढा नक्षत्र पश्चात उत्तराषाढा नक्षत्र शोभन योग गर करण चन्द्रमा धनु राशिमा पश्चात मकर राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु ( ज्यो.प.सरोज घिमिरे मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गैर ब्यक्तिको संगतले अपजसको सामना गर्नु पर्ला । यात्रा कारक समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्रशन्न रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा लगाईएको कर्मको प्रतिफल प्राप्तीका निम्ती सामान्य प्रतिक्क्षा गर्नु पर्नेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई...
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल श्रावण ७ गते बिहीबार इश्वी सन २०२१ जुलाई २२ तारीख असार शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथी मूल नक्षत्र ऐन्द्र योग गर करण चन्द्रमां धनु राशिमा आनन्दादि योगमा धुम्र योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) परिवारको मार्गदशर्न नमान्दा कार्यको क्षेत्रमा अपजस खेप्नु पर्नेछ । नयाँ मित्रहरु सगँ को भेट घाटमा सामान्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । अचल सम्पतीमा ह्रास आउनाले कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आम्दानि मध्यम रहेता पनि बोलिको कारण साधारण दुर्घटनाको सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले सहकार्यमा झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ । कुनै पनि निर्णय हतासमा नगरैकै बेश हुनेछ । दाजुभा...